Fitaovana | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Fomba hisafidianana lapoaly amin'ny lanezy: torohevitra sy tricks
Amin'ny fanombohan'ny ririnina, dia matetika no ilaina ny manala ny lanezy: eo an-tokotanin'ny tranon'olon-tsotra iray, akaikin'ny garazy, amin'ny trano fahavaratra, eo anoloan'ny fivarotana azy manokana. Saingy raha diso ny oram-panala, dia mety ho fanamby tena sarotra ho anao izany. Noho izany, mendrika kokoa ny fomba fiasa matihanina kokoa amin'ny fisafidianana ny orambe, ary ity lahatsoratra ity dia hanampy anao amin'izany.
Ahoana ny fomba ampiasaina sy hikarakarana ny tanana
Ny ankamaroan'ny olona mandray anjara amin'ny sehatry ny fambolena dia mampiasa lafy tanana. Mampiasaina izy io mba hampiasana ahi-maitso ho an'ny bibilava, ny sakafo ary ny ala. Ho an'ny filaminana sy ny serivisy, dia ilaina ny mahafantatra ny fomba famatoran-tanana sy ny fikarakarana ny tànana amin'ny fametrahana tanana. Ny fitaovana sy ny singa fototra Ny fitaovana fandidiana dia ahitana: antsy, kosovishche, fefy, kofehy ary peratra.
Mifidy mpikirakira antitra izahay: fametrahana mari-pahaizana
Ny fanatanterahana ny raharaha ao an-tokantrano kely dia matetika mitombo, ary fitaovana elektronika an-tanana, izay eo an-tanana mandrakariva, dia manamora izany. Ny iray amin'ireo fitaovana ireo, ny fanoloana tendrombohitra tsy misy fantsona tsy ilaina, dia mpanora-penitra. Afaka manampy haingana sy tsy misy ezaka izy hanatanterahana ny asa anatiny, ary ny fijerena sy ny fepetra momba ny kalitaon'ny "mpanampy" toy izany dia hanamora ny safidiny rehefa mividy izany.
Ahoana no fomba handaminana ny ala any an-trano?
Maro no faly rehefa tonga ny ririnina miaraka amin'ny bodofotsy fotsy. Ary na dia mankasitraka ny fambolena ririnina aza dia mitondra fanahy ambony, ity vanim-potoana ity koa dia mifandray amin'ny olana hafa: rehefa be loatra ny lanezy dia sarotra ny mivezivezy eny an-tokontany ary mamela ny fiara hiala ao amin'ny garazy. Azo atao koa ny manidy varavarana fidirana mankany an-trano ny lanezy.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fitaovana